I-EMME EMBILI - Ukulungiswa kwe-Aluminium - Messina
Ezokwakha kanye ne-Hydraulics - Ikhaya neFenisha
Iminyaka yesipiliyoni kanye nobuchwepheshe bokuphepha kwekhaya lakho
EMBILI EMME UDi Marchetta Antonio & C. yinkampani ese Via Bonsignore Antonio 28 a Messina futhi sekuyiminyaka ehola phambili ekukhiqizweni nasekukhangiseni kwe Amafreyimu wewindi le-Aluminium neWooden - Ipulasitiki - amawindi nezicabha ze-PVC, kuqinisekisa ukuphakama Ikhwalithi nobuchwepheshe.
Ozimele bekhwalithi be-aluminium namafasitela nge-DUE EMME
EMBILI EMME eMessina ibilokhu ikhiqiza ukulungiswa okuvulekile okuhlanganayo, ukhuni - i-aluminium ne ikhefu elishisayo, izicabucabu, izitshixo zokuvalwa zensimbi - ku-pvc kanye ne-aluminium, izitshudeni ezakhiwe ngamatshe omiyane, amanetha omiyane, amabhokisi okugeza, amafasitela ezinhlobonhlobo (zokhuni neze-attics), amasango, amafasitela ezitolo, ojantshi, uthango, ama-verandas, iminyango enezixhobo, ophahleni olufakiwe amawindi e-pvc, izihambisi ezihlomile nokunye.
Inkampani EMBILI EMME ihlinzeka ngesicelo imikhiqizo ye-aluminium eseqedile isiqediwe ngezesekeli.
Phakathi kwezinsizakalo ezinikezwayo, kufaka phakathi izilinganiso zamahhala, ikhwalithi ephezulu yezinto ezisetshenziselwa ukwakhiwa kwalokho okulungiswa nayo yonke imikhiqizo ethengiswayo nayo iyaqinisekiswa: i-aluminium, insimbi nakho konke okokusebenza kuhambisana nemithetho yaseYurophu.
Izisombululo ezenziwe ngezifiso futhi nge break ezishisayo
Le nkampani inikeza ama-thermocopings ngamaphaneli wensimbi afakayo aklanyelwe futhi aklanyelwe ukunikela okungcono kakhulu ekwakhiweni kophahla nophahla, ngekhono lokwenza ngezifiso amaphrojekthi, axazulule izidingo ezahlukahlukene zekhasimende futhi afinyelele kokuphakama kwezakhiwo.
Izinga eliphakeme le-aluminium-wood noma lwefasitela le-PVC, uhlelo olusha lwe-thermal break nge-windows insulation kanye nomklamo oguqukayo wenza amafasitela nozimele banikezwe, izixazululo ezinhle kakhulu emakethe: ezithembekile, ezihlala isikhathi eside futhi ezinemvelo ezinobungcweti kulezi windows zingena ezihlukile ukunambitheka nezitayela, ziba ngezifiso futhi ezilungele izidingo ezihlukahlukene kakhulu, njengamandla aphansi kanye nezindlu ezifakiwe. Ngaphezu kwalokho, izixazululo ezinikezwayo zingavikeleki kwesimo sezulu, ukufudumeza okushisa futhi kulula ukuzihlanza.
Ubungcweti kanye nekhwalithi emazingeni aphezulu
EMBILI EMME eMessina ngokukhethekile ekusebenzeni kwe ozimele wewindi, izinkuni-i-aluminium, ikhefu elifudumezayo, i-aluminium ecijile, izitshudlwana ezigudlwa, izembozo kanye nezimbozo zokushisa: isisebenzi esiqeqeshiwe nesihlaziywa njalo siyisiqinisekiso sekhwalithi nobungcweti. Insizakalo yosizo lwamakhasimende nayo inikezwa zombili ngesikhathi sokukhethwa kokulungiswa nangemva kokuthenga.
Uma ufuna isisombululo esifanele sokuphepha kwendlu yakho ngokulungiswa kwekhwalithi namafasitela, thintana naye EMBILI EMME eMessina enye yezinkampani ezinhle kakhulu kulo mkhakha.
Ikheli: Via Bonsignore 28 ZIR
Ucingo: 090 693689
Umakhala ekhukhwini: 090 693689
Umakhala ekhukhwini: 340 9279692
Inombolo ye-VAT: 01975910835